२०७५ असार २२ शुक्रबार, काठमाडौं । प्रतियोगितामा उपाधिको दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका दुई टोली ब्रजिल र बेल्जियम क्वार्टरफाईनलमा भिड्दैछन्। ... बाँकी अंश»
क्वार्टरफाईनल पुर्वसन्ध्यामा ब्रजिललाई झट्का, डेनिलो पुन: घाईते
२०७५ असार २२ शुक्रबार, काठमाडौं। ब्रजिलका रक्षापंक्तिका खेलाडी डेनिलो देब्रे कुर्कुच्चामा लागेको चोटका करण विश्वकपबाट बाहिरिएका छन्। ... बाँकी अंश»
क्वार्टफाइनलका आठ टोलीहरुः यस्तो छ इतिहास
२०७५ असार २२ शुक्रबार, काठमाडौं । रुस विश्वकपको क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । आठ टोलीहरुको बीचमा शुक्रबार र शनिबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो विश्वकपमा अनुमान गरिएभन्दा फरक किसिमका केही नतिजाहरु हासिल भएका छन् । जसको कारण केही आशा गरिएका टोलीहरु बाहिरिएका छन् भने असोचेका टोलीहरुले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । क्वार्टरफाइनलमा पुग्ने टोलीहरुले केही इतिहास पनि कायम गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
झ्याङगिँदैछ अपराध, पन्छिन्छ प्रहरी
२०७५ असार २२ शुक्रबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबल रुसमा चलिरहँदा त्यसको बाजी नेपालमा लाग्ने गर्छ । त्यो पनि हजार, लाख वा करोडमा हैन करोडौंमा । एक दुई जनाले होइन हजारौं जनाले । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार २२ शुक्रबार, काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको दोस्रो क्वार्टरफाइनलको खेलमा ब्राजिल र बेल्जियमको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेपाली समयअनुसार रातको पौने १२ बजे उनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
पहिलो क्वार्टरफाइनल भिडन्तः बेलुकी उरुग्वे भर्सेस फ्रान्स, यस्तो छ अवस्था
२०७५ असार २२ शुक्रबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको पहिलो क्वार्टरफाइनलको खेलमा शुक्रबार फ्रान्स र उरुग्वे भिड्दैछन् । उपाधि दाबेदार मानिएका यी दुई टोलीहरुको बीचमा नेपाली समयअनुसार बेलुका पौने ८ बजे प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
उरुग्वेसँगको क्वार्टरफाइनलका लागि फ्रान्सको यस्तो छ तयारी
२०७५ असार २१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सले उरुग्वेसँगको क्वार्टरफाइनल खेलका लागि आफ्नो तयारी जारी राखेको छ । फ्रान्सका खेलाडीहरुले आगामी खेलको लागि तयारी निरन्तर तयारी गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
नेयमार सनक ! छोरासँग क्वार्टरफाइनल अभ्यास
२०७५ असार २१ बिहिबार, काठमाडौं । ब्राजिलियन स्टार नेयमारले आफ्नो छोरासँगै फुटबलको अभ्यास गरेका छन् । क्वार्टरफाइनलको आगामी खेलको लागि तयारीमा रहेका नेयमार बुधबार भने छोराको साथमा मैदानमा देखिएका हुन् । ... बाँकी अंश»
मेस्सी राम्रो कि रोनाल्डो भन्नेमा विवाद, पतिले छाडे पत्नी र घर
२०७५ असार २१ बिहिबार, काठमाडौं । अर्जेन्टाइन फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी राम्रो कि पोर्चुगिच स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो भन्नेमा विवाद भएपछि एक जोडीबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलको अनुमानबारे बाजी खेल्ने १० हजार जना पक्राउ
२०७५ असार २१ बिहिबार, बैंकक । थाइल्याण्डमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०१८ का विभिन्न खेललाई लिएर बाजी खेलेको आरोपमा दश हजार जना पक्राउ परेका छन् । ... बाँकी अंश»
विना पैसा अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षक बन्न म्याराडोना तयार
२०७५ असार २० बुधबार, काठमाडौं । अर्जेन्टिनाका पूर्व फुटबलर डिएगो म्याराडोनाले अर्जेन्टिनाको टोलीलाई निःशुल्क प्रशिक्षण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । रुस विश्वकपबाट यो टोली बाहिरिएसँगै म्याराडोनाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
रुस विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनल कसको भिडन्त कोसंग कहिले ?
२०७५ असार २० बुधबार, काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । क्वार्टरफाइनलमा पाँच पटकको विजेता ब्राजिल, दुई पटकको विजेता युरुग्वे तथा एक एक पटकको विजेता फ्रान्स र इंगल्याण्ड पुगेका छन् । ... बाँकी अंश»
को को हुन् विश्वकप फुटबलका विजेता ?
२०७५ असार २० बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको सुरुआत सन् १९३० देखि भएको हो । बीचको समयमा दोस्रो विश्वयुद्धका कारण हुन नसके बाहेक यो हरेक ४–४ वर्षमा हुँदै आएको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा
२०७५ असार २० बुधबार, काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । क्वार्टरफाइनलमा पाँच पटकको विजेता ब्राजिल, दुई पटकको विजेता युरुग्वे, एक पटकको विजेता फ्रान्स र एक पटकको विजेता इंगल्याण्ड पुगेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार २० बुधबार, काठमाडौं। नाटकीय खेलमा ईङल्याण्डले कोलम्बियालाई टाईब्रेकरमा पराजित गर्दै क्वार्टरफाईनल प्रवेश गरेको छ। ईङल्याण्डले कोलम्बियालाई पेनाल्टीमा ४-३ गोलले पराजित गरेको हो। ... बाँकी अंश»
स्विजरल्याण्डलाई पराजित गर्दै स्वेडेन क्वार्टरफाईनल प्रवेश
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं। स्विडेनले स्विजरल्याण्डलाई पराजित गर्दै विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाईनल प्रवेश गरेको छ। स्विडेन स्विजरल्याण्ड बिरुद्ध १-० गोलले बिजयी भएको हो। ... बाँकी अंश»
विश्वकपमा बाजी खेलाउनेहरुलाई प्रहरीले पक्रिन थाल्यो
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका सन्दर्भमा विभिन्न टीमको हार तथा जितमा सट्टेबाजी खेलाउने व्यक्तिहरु प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ... बाँकी अंश»
गोल्डेन बुटको दौडमा ह्यारी केन, कोलम्बिया जित्ने दाउमा इंगल्याण्ड
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । मंगलबार विश्वकपमा अन्तिम १६ अन्तर्गत कोलम्बिया । इंगल्याण्डको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । समुह 'जी' को उपविजेता इंगल्याण्ड र 'एच' को विजेता टोलीको बीचमा नेपाली समयअनुसार राति पौने १२ बजे यो प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । दुवै सशक्त टोलीहरुको बीचमा हुन गइरहेको यो प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
स्विडेन भर्सेस स्विट्जरल्याण्ड, जिते क्वाटरफाइनल हारे घर
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वकपमा मंगलबार अन्तिम १६ का खेलहरुमा स्विडेन र स्विट्जरल्याण्डको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेपालीसमयअनुसार बेलुका पौने ८ बजे उनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो । समुह ईको उपविजेता र समुह एफको बीचमा मंगलबार रोचक प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलका अन्तिम प्रि–क्वार्टरका खेलहरु मंगलबार हुँदै, को को भिड्दै
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । रुसमा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा राउण्ड अफ सिक्सटिनका खेलहरु मंगलबार सकिदैछन् । अन्तिम दुई प्रिक्वार्टरफाइनलका खेलहरु मंगलबार हुन लागेका हुन् । ... बाँकी अंश»